एफेक्सोर बनाम लेक्साप्रो: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी चेकआउट प्रेस समाचार, कल्याण औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समुदाय कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण मनोरञ्जन समुदाय, कल्याण घरपालुवा जनावर औषधि बनाम मित्र खेलहरु
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> एफेक्सोर बनाम लेक्साप्रो: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
एफफेक्सोर र लेक्साप्रो दुई औषधीहरू हुन् जुन दुबै प्रमुख डिप्रेशन डिसअर्डर (MDD) र सामान्यीकृत चिन्ता डिसअर्डर (GAD) को उपचारमा प्रयोग गर्दछ। डिप्रेसन को लक्षणहरु मा कम मूड कम्तिमा दुई हप्ता को अवधि र सामान्य गतिविधिहरु मा चासो को हानि को लागी हुन सक्छ।
सामान्यीकृत चिन्ता भनेको मुद्रा, स्वास्थ्य, परिवार, र कार्यहरू बिगत छ महिनाको लागि भन्दा बढि दिनहरू हुने विभिन्न प्रकारका मुद्दाहरूको बारेमा अत्यधिक चिन्ताको विषय हो। दुबै MDD र GAD लाखौं अमेरिकीहरूलाई प्रभाव पार्दछ, र पर्याप्त उपचार जीवनको गुणस्तरको लागि महत्वपूर्ण छ। डिप्रेसन वा चिन्ताको उपचारमा शारीरिक गतिविधि, ध्यान, वा मनोचिकित्सा बढ्न सक्छ। केहि केसहरूमा प्रभावकारी उपचारका लागि औषधि आवश्यक पर्दछ।
एफेक्सोर र लेक्साप्रो बीचको मुख्य भिन्नताहरू के के हुन्?
एफफेक्सोर (भेन्लाफैक्सिन) एक पर्चेको औषधि हो जुन दुबै MDD र GAD को उपचारमा संकेत गरिएको छ। एफफेक्सोर एन्टिडिप्रेसन्ट्सको समूहसँग सम्बन्धित छन जुन सेलेक्टिभ सेरोटोनिन-नोरपाइनफ्रिन रिअपटेक इन्हिबिटरहरू (SNRIs) को रूपमा चिनिन्छ। ईफेक्सोरले दुबै नोरपाइनफ्रीन र सेरोटोनिन दुबैको पुनःअपटेक रोक्छ न्युरोन सिनप्सेमा, अधिक प्रभावकारी रूपमा अझ नि: शुल्क सेरोटोनिन र नोरिपाइनफ्रिन उपलब्ध रहन्छ। यी न्यूरोट्रान्समिटरहरूले मुडमा सकारात्मक भूमिका खेल्छन् र प्रभाव गर्दछ। अन्य SNRI हरू जुन तपाईसँग परिचित हुन सक्नुहुनेछ सिम्बाल्टा (ड्युलोक्सेटीन) र प्रिस्टिक (डेसेन्फ्लेक्सिन) हो।
एफफेक्सोर (ईफेक्सोर के हो?) २ immediate मिलीग्राम, .5 37..5 मिलीग्राम, mg० मिलीग्राम, mg 75 मिलीग्राम, र १०० मिलीग्रामको शक्तिमा तत्काल रिलीज ट्याब्लेटहरूमा उपलब्ध छ। यो extended 37..5 मिलीग्राम, mg 75 मिलीग्राम, र १ 150० मिलीग्रामको क्षमतामा विस्तारित रिलिज ट्याब्लेटहरू र क्याप्सुलहरूमा पनि उपलब्ध छ। विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेट पनि २२5 मिलीग्राम शक्तिमा आउँछ।
लेक्साप्रो (एसिटालोप्राम) एक पर्चेको औषधी हो जुन दुबै MDD र GAD को उपचारमा संकेत गरिएको छ। लेक्साप्रो एन्टिडिप्रेसन्ट्सको समूहसँग सम्बन्धित छन जुन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर (एसएसआरआई) को रूपमा चिनिन्छ र न्यूरोनल झिल्ली ट्रान्सपोर्ट पम्पमा सेरोटोनिनको पुनःअपटेक रोक्दै काम गर्दछ। यस कार्यले न्युरोन सिनप्सेमा अधिक नि: शुल्क सेरोटोनिन छोड्छ, र उच्च सेरोटोनिन स्तर राम्रो मुडसँग सम्बन्धित छ। अन्य एसएसआरआईहरू जसलाई तपाई परिचित हुन सक्नुहुन्छ त्यसमा प्रोजाक (फ्लुओक्सेटीन), जोलोफ्ट (सेर्टरलाइन), सेलेक्सा (सिटोलोप्राम), वा प्याक्सिल (प्यारोक्सेटिन) समावेश छ।
लेक्साप्रो (लेक्साप्रो के हो?) मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा mg मिलीग्राम, १० मिलीग्राम, र २० मिलीग्रामको शक्तिमा उपलब्ध छ। यो mg मिलीग्राम / m मिलि एकाग्रतामा मौखिक समाधानको रूपमा पनि उपलब्ध छ।
एफेक्सोर र लेक्साप्रो बीच मुख्य भिन्नता
जेनेरिक नाम के हो? भेन्लाफैक्सिन Escitalopram
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? ट्याब्लेट, विस्तारित-रिलीज क्याप्सूल, र ट्याब्लेटहरू ट्याब्लेट र मौखिक समाधान
मानक खुराक के हो? Mg 75 मिलीग्राम XR प्रति दिन एक पटक प्रति दिन १० मिलीग्राम
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? अनिश्चित अनिश्चित
सामान्य व्यक्ति को चीनी स्तर के हो
ईफेक्सोर र लेक्साप्रो द्वारा उपचार गरिएका सर्तहरू
ईफेक्सोर र लेक्साप्रो दुबै ठूला डिप्रेशन डिसअर्डर र सामान्यीकृत चिन्ता विकारको उपचारमा संकेत गरिएका छन्। एफफेक्सोर दुबै सामाजिक फोबिया र पैनिक डिसअर्डरको लागि संकेतहरू बोक्छ। त्यहाँ दुबै औषधिहरूको केही अफ-लेबल प्रयोगहरू छन्। अफ-लेबल प्रयोग तब हुन्छ जब एक फूड र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित नभएको संकेतको लागि औषधि तोकिन्छ। एफेक्सोर जुनूनी - बाध्यकारी डिसऑर्डर (ओसीडी), प्रीमेनस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसअर्डर (पीएमडीडी), र रजोनिवृत्तिसँग सम्बन्धित तातो चमकमा अनुमोदन बिना प्रयोग गरिएको छ। लेक्साप्रो कहिलेकाँही ओसीडी, बुलिमिया नर्भोसा, र द्वि घातुमान खाने जस्तो अवस्थाको लागि अफ-लेबल प्रयोग गरिन्छ।
तलको चार्टले ईफेक्सोर र लेक्साप्रो द्वारा उपचार गरिएको सर्तहरूको सूची प्रदान गर्दछ। यसले सबै सम्भावित प्रयोगहरू समावेश नगर्न सक्छ, र तपाईं सधैं आफ्नो हेल्थकेयर प्रोफेशनलसँग परामर्श लिनु पर्छ यी औषधिहरू मध्ये कुनै एक तपाईंको लागि सही हो कि भनेर हेर्नका लागि।
सर्त ईफेक्सोर लेक्साप्रो
सामाजिक फोबिया हो हैन
जुनूनी बाध्यकारी विकार अफ-लेबल अफ-लेबल
मासिकपूर्व डिस्फोरिक डिसअर्डर अफ-लेबल अफ-लेबल
रजोनिवृत्तिको कारण तातो चमकहरू अफ-लेबल हैन
द्वि घातुमान खाने हैन अफ-लेबल
पोस्ट-ट्रामाटिक स्ट्रेस डिसअर्डर हैन अफ-लेबल
के एफफेक्सोर वा लेक्साप्रो अधिक प्रभावकारी छ?
TO मेटा-विश्लेषण ईफेक्सोर, लेक्साप्रो र अन्य धेरै सामान्य एन्टीडिप्रेसस औषधिहरू तुलना गरी १ compared बर्ष अवधिमा ११7 अनियमित परीक्षणहरूमा प्रभावकारिता र सहनशीलताको आधारमा। परिणामहरूले पत्ता लगाए कि दुबै एफेक्सोर र लेक्साप्रो उदासिनताको उपचारमा समान रूपमा प्रभावकारी थिए, र दुबै धेरै अन्य एन्टिडिप्रेसन्ट औषधिहरू भन्दा प्रभावकारी थिए। जे होस्, ईफेक्सोरको साइड इफेक्ट प्रोफाइल लेक्साप्रो भन्दा यो सहन कठिन हुन सक्छ। यसले एफेक्सोरको प्रयास गर्नु अघि लेक्साप्रोसँग उपचारको प्रयास गर्न प्रेसकहरूलाई नेतृत्व लिन सक्छ।
एफफेक्सर बनाम लेक्साप्रोको कभरेज र लागत तुलना
ईफेक्सोर एक प्रिस्क्रिप्शन-मात्र औषधि हो जुन सामान्यतया दुबै व्यावसायिक र मेडिकेयर बीमा योजनाहरू द्वारा कभर गरिएको छ। एफफेक्सर एक्सआर mg 75 मिलीग्रामको -०-दिनको आपूर्तिको लागि बाहिरको पकेट मूल्य $ १66 को रूपमा हुन सक्छ। एकलकेयरबाट एक एफफेक्सर कुपनको साथ, तपाईं सामान्य around १$ को लागि खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
लेक्साप्रो एक प्रिस्क्रिप्शन औषधि पनि हो जुन सामान्यतया दुबै व्यवसायिक र मेडिकेयर औषधि योजनाहरू द्वारा आच्छादित हुन्छ। लेक्साप्रो १० मिलीग्रामको -०-दिनको आपूर्तिको बाहिरको पकेट मूल्य लगभग nearly २०० खर्च गर्न सक्दछ। एकलकेयरले जेनेरिक लेक्साप्रोको लागि कूपन प्रस्ताव गर्दछ, जसले भाग फार्मेसीहरूमा लगभग $ १ to लाई कम गर्न सक्दछ।
मानक खुराक ,०, mg 75 मिलीग्राम XR क्याप्सूल ,०, १० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू
एकलकेयर लागत $ १ + + $ १ + +
एफेक्सोर बनाम लेक्साप्रोको सामान्य साइड इफेक्टहरू
ईफेक्सोर र लेक्साप्रो दुबै साइड इफेक्टहरू छन् जुन सम्भावित रूपमा बिरामीहरूको अनुपालनमा प्रभाव पार्न सक्छ। यी औषधिहरू प्रत्येकले उनीहरूले उपचार गरिरहेका विकारहरूमा प्रभाव पार्न ढिलो छ, कहिलेकाँही लक्षणहरूलाई प्रभाव देखाउन दुई देखि छ हप्ता सम्म कहिँ पनि लिन्छन्। बिरामीहरूले उनीहरूको अस्वस्थताका लक्षणहरूमा क्षतिपूर्ति पाउन अघि कष्टदायक साइड इफेक्टहरू अनुभव गर्न सक्दछन्। यसले बिरामीहरूलाई पनि चाँडै थेरापी बन्द गर्न सक्दछ, र उनीहरूको विकारको उपचार हुँदैन। उपचार सुरु गर्नु अघि बिरामीहरूलाई सम्भावित साइड इफेक्टहरूको बारेमा सचेत गराउन महत्त्वपूर्ण छ।
एफेक्सोर लेक्साप्रो भन्दा निद्रामा धेरै स्पष्ट प्रभाव पार्छ। लगभग बिरामीहरूको १%% अनिद्रा रिपोर्ट, ईफएक्सोरमा हुँदा पतन र निदाउन असमर्थता। मात्र %% को बिरामीहरु लेक्साप्रो संग यो प्रतिकूल घटना रिपोर्ट। यी ड्रग्सले अस्वस्थता, वा अत्यधिक तन्द्रा लिन सक्छ। एफेक्सोर ले ap. Le% लेक्साप्रोसँगको तुलनामा गम्भीरता रिपोर्ट गर्ने बिरामीहरूको s..5% का साथ गम्भीर समस्या हुने सम्भावना बढी हुन्छ। निद्राले जीवनको गुणस्तरलाई असर गर्छ र यी साइड इफेक्टहरू थेरापी शुरू गर्नु अघि महत्त्वपूर्ण विचार हो।
दुबै औषधीको साथ पाचन पक्षका प्रभावहरू पनि रिपोर्ट गरिएको छ। एफेक्सोरले लेक्साप्रो भन्दा मतली, पखाला, र कब्ज हुने घटनाहरू हुने बढी सम्भावना हुन्छ, यद्यपि यी साइड इफेक्टहरू कुनै पनि औषधिको साथ हुन सक्छ।
कम कामवासन, वा यौन ड्राइभ, लेक्साप्रो भन्दा एफिएक्सोरले नकरात्मक रूपमा बढी प्रभावित हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यो साइड इफेक्टको अनुभव गरिरहेका बिरामीहरूसँग जीवनको गुणवत्ताको छलफल हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
यो तालिकाको सम्भावित साइड इफेक्टको पूर्ण सूची हुने उद्देश्यले गरिएको छैन। पूर्ण सूचीको लागि कृपया एक चिकित्सा पेशेवरको सल्लाह लिनुहोस्।
मतली हो ११..8% हो %%
सुख्खा मुख हो .3..3% हो %%
पसिना हो २.9% हो दुई%
पखाला हो 7.7% हो %%
कब्ज हो 4.4% हो १%
चक्कर हो १.8.%% हो %%
अनिद्रा हो १.8..8% हो %%
तन्द्रा हो .5..5% हो दुई%
रक्तचाप बढ्यो हो 4.4% हैन n / a
भोक कम भयो हो 8 .8% हो १%
कामवासना घटाइयो हो .1.१% हो १%
स्रोत: डेलीमेड ( ईफेक्सोर ) डेलीमेड ( लेक्साप्रो )
ईफेक्सोर बनाम लेक्साप्रोको ड्रग अन्तर्क्रिया
ईफेक्सोर र लेक्साप्रो प्रत्येक काम उपलब्ध सेरोटोनिन बढाउँदै। जब यी औषधिहरूमध्ये एकलाई सेरोटोनर्जिक गतिविधि भएका अन्य औषधीहरूसँग मिसाइन्छ, यसले बिरामीले सेरोटोनिन सिन्ड्रोम अनुभव गर्ने सम्भावना बढाउँछ। सेरोटोनिन सिन्ड्रोम एक अवस्था हो जुन धेरै सित्तैमा सेरोटोनिन भएको कारणले बढेको रक्तचाप र मुटुको दर, आन्दोलन, र चक्कर आउँछ। सेरोटोनर्जिक गतिविधि सहितको ड्रग्समा दुखाइ औषधि ट्रामाडोल र मुटुका लागि बिरामीहरू द्वारा प्रयोग गरिने एक पूरक, सेन्ट जोन्स वाउर्ट समावेश छ। औषधोपचारका अन्य वर्गहरूले यस तरिकामा पनि अन्तरक्रिया गर्न सक्दछन्, त्यसैले तपाईंको डाक्टर र फार्मासिष्टको लागि तपाईंले लिइरहेका औषधीहरूको पूर्ण सूची हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
ओन्डानसेट्रोन, जब एफेक्सोर वा लेक्साप्रोको साथ लिइन्छ, क्यूटी विस्तार र टुक्र्याडे डे पोइन्ट्स (टीडीपी) को रूपमा चिनिने एरिथिमियाको घटना बढ्न सक्दछ। प्रत्येक ड्रगिले यी कार्डियक घटनाहरूको लागि जोखिम बोक्छ, तर तिनीहरूको संयुक्त प्रयोगले जोखिमलाई महत्त्वपूर्ण बृद्धि गर्दछ। यी हृदय घटनाहरू केहि मामलाहरूमा घातक हुन सक्दछन्, र ओन्डानसेट्रोनसँग यी औषधीहरूको संयोजनलाई सम्भव भएमा टाढा बस्न सकिन्छ।
यो सम्भावित ड्रग अन्तरक्रियाको पूर्ण सूची हुने उद्देश्यले होइन। पूर्ण सूचीका लागि तपाईको डाक्टर वा फार्मासिष्टबाट परामर्श लिनुहोस्।
औषधि औषधि वर्ग ईफेक्सोर लेक्साप्रो
Oxitriptan 5HT Agonist / triptans (एन्टिमेग्रेन एजेन्ट) हैन हो
ओन्डानसेट्रोन 5HT3 विरोधीहरू
(विरोधी मतली एजेंटहरू) हो हो
हेपेरिन एन्टिकोआगुलेन्टहरू हो हो
फ्लुकोनाजोल एन्टिफंगल हो हो
हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन एमिनोक्विनोलोन /
एन्टिमेलेरियल हो हो
पिमोजाइड एन्टिसाइकोटिक हो हो
एफेक्सोर र लेक्साप्रोको चेतावनी
एफेक्सोर र लेक्साप्रो मानसिक स्वास्थ्य विकारहरू जस्तै प्रमुख उदासीनता र सामान्य चिंताको रूपमा प्रयोग गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। एफफेक्सोर र लेक्साप्रोको प्रभाव तत्काल हुँदैन। दुईदेखि छ हप्ता सम्म लाग्न सक्दछ ड्रग्सबाट कुनै असर पर्न। यो बुझ्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ कि लक्षणहरूको क्षमा तुरून्त नहुन सक्छ, र बिरामीहरूलाई पहिले उनीहरूको सल्लाहको आधारमा उपचार बन्द नगर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ।
डिप्रेसनका बिरामीहरूले लक्षणहरू वा आत्महत्या गर्ने विचारको बिग्रँदो अनुभव गर्न सक्छन् वा उनीहरूले एन्टीडिप्रेसन्ट औषधीहरू लिइरहेका छन् वा छैनन्। यी सर्तहरू माफी प्राप्त नभएसम्म अझ खराब हुन सक्छ। एफेक्सोर र लेक्साप्रो थेरेपीले किशोर र युवा वयस्कहरूको बीचमा आत्महत्या गर्ने विचार र सोच बढाउन सक्छ, विशेष गरी उपचारको प्रारम्भिक चरणहरूमा कुनै पनि प्रकारको छुट पाउन अघि। यी बिरामीहरूलाई नजिकबाट निरीक्षण गर्नुपर्दछ, र लक्षणहरू अचानक देखा पर्‍यो वा झन् खराब भएमा परिवर्तन आवश्यक पर्दछ।
सेरोटोनिन सिन्ड्रोम एफिएक्सोर, लेक्साप्रो, र अन्य समान एन्टीडिप्रेसस औषधिहरूको प्रयोगसँग सम्बन्धित छ। यो धेरै सित्तैमा सेरोटोनिनसँग सम्बन्धित छ र बढेको मुटुको दर, आन्दोलन, र चक्कर आउँछ। सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको जोखिम बढ्दछ जब अन्य सेरोटोनर्जिक ड्रग्स एफेक्सोर वा लेक्साप्रोको साथ प्रयोग गरिन्छ।
एफेक्सोर र लेक्साप्रो अचानक वा तपाईंको प्रिस्क्रिबरको ज्ञान बिना रोक्नु हुँदैन। यी औषधीहरू अचानक बन्द गर्नाले फिर्ता हुने लक्षणहरू हुन सक्छ जस्तै टाउको दुख्ने, चक्कर आउने, थकान, र चिढचिलोपन।
एफेक्सोर बनाम लेक्साप्रोको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
एफफेक्सोर एक प्रिस्क्रिप्शन एन्टीडिप्रेसस औषधि हो जुन प्रमुख डिप्रेशन र सामान्य चिंताको विकारको उपचारमा प्रयोग गर्दछ। यो नि: शुल्क सेरोटोनिन र norepinephrine बढाउँदै काम गर्दछ। लेक्साप्रो तत्काल र विस्तारित-रिलीज ट्याब्लेटहरूमा उपलब्ध छ, र विस्तारित-रिलीज क्याप्सूलहरू।
लेक्साप्रो एक प्रिस्क्रिप्शन एन्टीडिप्रेसस औषधि हो जुन प्रमुख डिप्रेशन र सामान्य चिंताको विकारको उपचारमा प्रयोग गर्दछ। यो नि: शुल्क सेरोटोनिन बढाउँदै काम गर्दछ। लेक्साप्रो मौखिक ट्याब्लेट र मौखिक समाधानको रूपमा उपलब्ध छ।
ईफेक्सोर र लेक्साप्रो उस्तै हो?
जबकि दुबै एफेक्सोर र लेक्साप्रोले डिप्रेसन र चिन्ताको उपचार गरिरहेका छन्, तिनीहरू समान छैनन्। ईफेक्सोरले न्युरोनल सिनप्सेमा सेरोटोनिन र नोरिपाइनफ्रेन दुबैको पुनःअपटेक रोक्दछ, जबकि लेक्साप्रोले मात्र सेरोटोनिन रिअपटेक रोक्दछ।
ईफेक्सोर वा लेक्साप्रो राम्रो छ?
एफेक्सोर र लेक्साप्रो उदासीनताको उपचारमा प्रभावकारिताको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा देखाइएको छ, तथापि, अध्ययनहरूले देखाएअनुसार लेक्साप्रो सहन गर्न सजिलो हुन सक्छ। लेक्साप्रोमा बिरामीहरूले कम उपचार चाँडै बन्द गर्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ।
के म गर्भवती हुँदा एफेक्सोर वा लेक्साप्रो प्रयोग गर्न सक्छु?
खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) दुबै एफेक्सोर र लेक्साप्रोलाई गर्भावस्था कोटि सी मा मान्दछ, यसको मतलब सुरक्षा निर्धारण गर्न पर्याप्त मानव अध्ययन भएको छैन। यी औषधिहरूको प्रयोग सीमित हुन सक्दछ जब लाभ स्पष्ट रूपमा जोखिमहरू भन्दा बढि हुन्छ। दुबै एफेक्सोर र लेक्साप्रोलाई स्तनपान गराउने आमाहरूमा पनि अलग रहनु पर्छ।
म रक्सीको साथ एफेक्सोर वा लेक्साप्रो प्रयोग गर्न सक्छु?
रक्सीले दुबै एफेक्सोर र लेक्साप्रोको प्रतिकूल प्रभाव बढाउन सक्छ। यी ड्रग्स लिँदा रक्सी पिउँदा महत्त्वपूर्ण साइकोमोटर बिरामी हुन सक्छ, र यस कारणका लागि बिरामीहरूलाई सल्लाह दिइन्छ कि यी औषधिहरू लिईएको खण्डमा मद्यपान नगर्नुहोस्।
के इफेक्सोर सर्वश्रेष्ठ एन्टीडिप्रेससन्ट हो?
ईफेक्सोर प्रभावकारी रूपमा देखाइएको छ, अधिक नभएमा, अन्य एन्टीडिप्रेसस औषधिहरू भन्दा। जे होस्, बिरामीहरूलाई सहन यो बढी गाह्रो हुन सक्छ। तपाईंको डाक्टरले निर्णय गर्ने कि कुन उपचार विकल्प तपाईंको लागि उत्तम हो।
एफफेक्सर र भिन्लाफैक्सिन बीच के भिन्नता छ?
भेन्लाफैक्सिन ईफेक्सोरको जेनेरिक नाम हो, जुन एक ब्रान्ड नाम उत्पाद हो। जेनेरिक भेलाफाक्सिन उत्पादनहरू एफडीए द्वारा एफफेक्सोरको लागि विकल्प मानिन्छ।
के भेलाफ्याक्सिनले तपाईंलाई शान्त बनाउँछ?
जबकि केही बिरामीहरूले एफिएक्सोरमा हुँदा चर्को अनुभव गर्न सक्छन्, यो पनि केही बिरामीहरूमा आन्दोलन र कम्पन पैदा गर्दछ। तपाईको चिकित्सकसँग कुरा गर्नुहोस् कि निर्धारण गर्नका लागि कि यो औषधि तपाई लाई लाग्न सक्छ।
के इफेक्सोरले मेमोरीमा असर गर्छ?
एमनेसिया ईफेक्सोर उत्पादनहरू लिने बिरामीहरूको सानो संख्यामा रिपोर्ट गरिएको छ। यदि तपाईंले यो प्रतिकूल घटना याद गर्नुभयो भने, तपाईंको प्रिस्क्राइडरलाई तुरुन्तै थाहा दिनुहोस् कि थेरापीमा परिवर्तन आउँदछ।
b२ घण्टा पछि योजना बी गोली काम गर्दछ
दैनिक कति भिटामिन डी लिनुपर्छ
बच्चाहरु मा कान को संक्रमण को लागी घरेलु उपचार